Iwuli akwukwo ihe omuma: Atụmatụ 7 chọrọ ka azụmahịa gị dabere na | Martech Zone
Ihe dị ka otu ọnwa gara aga, agara m sonye na nzukọ ịzụ ahịa ahịa maka onye ahịa. Ọ dị mma, na-arụ ọrụ na ndụmọdụ mara maka mmepe ụzọ maka ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu. Dika esi emeputa uzo ndi ozo, enwere m obi uto uzo ndi ozo di iche na ndi ozo di iche iche nke ndi otu biara. Otú ọ dị, ekpebisikwara m ike ịhapụ ndị otu ahụ n'ahịa a lekwasịrị anya.
Innovation bu ihe di oke nkpa na otutu ulo oru taa, ma o nweghi ike iburu ndi ahia ya. Companieslọ ọrụ dị egwu nke nwere ọgụgụ isi agbanwebeghị kemgbe ọtụtụ afọ n'ihi na ha bịara n'oge na-adịghị anya, ma ọ bụ nyeju ọchịchọ nke na-adịbeghị. Ha abụọ nwere ike ịkọwa ọdachi - ọchịchọ bụ akụkụ dị mkpa nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ọ bụla na-aga nke ọma.
Mgbe e zigara m otu Iwuli akwukwo akuko, nke Donald Miller, enweghi m obi eziokwu na m enweghi obi uto iguta ya ka o noro na mpempe akwukwo m rue na nso nso a. Echere m na ọ ga-abụ ihe ọzọ na-akpali ịkọ akụkọ na otu o nwere ike isi gbanwee ụlọ ọrụ gị… mana ọ bụghị. N'ezie, akwụkwọ ahụ ji "Nke a abụghị akwụkwọ banyere ịkọ akụkọ ụlọ ọrụ gị." Chei!
Achọghị m ịhapụ akwụkwọ ahụ dum, ọ bụ ngwa ngwa ma gụọ ihe m ga-atụ aro ya. Agbanyeghị, enwere ndepụta dị egwu m chọrọ ịkekọrịta - ịhọrọ a ọchịchọ dị mkpa maka ika gị lanarị.
Asaa Na-atụ Anya Gị Brand si Surlanahụ Na-adabere:
Na-echekwa akụnụba ego - you ga - echekwa ego ndị ahịa gị?
Na-echekwa oge - Ngwaahịa gị ma ọ bụ ọrụ gị ọ ga-enye ndị ahịa gị oge ka ha rụọ ọrụ n’ihe ndị ka mkpa?
Iwulite netwọkụ mmekọrịta - Ngwaahịa gị ma ọ bụ ọrụ gị ọ na-azụlite ọchịchọ nke onye ahịa gị ijikọ?
Inweta ọnọdụ - you na-ere ngwaahịa ma ọ bụ aka ọrụ ga-enyere onye ahịa gị aka inweta ikike, ugwu, na mmezi?
Na-akpakọba akụrụngwa - Inye onyinye na-abawanye ụba, nnweta, ma ọ bụ ihe mkpofu belatara na-enye ohere maka azụmaahịa na-eto eto.
Ọchịchọ ebumpụta ụwa imesapụ aka - Mmadu nile nwere mmuta nke mmasi imesapuru aka.
Ọchịchọ inwe nzube - Ohere ndi ahia gi isonye na ihe kariri onwe ha.
Dị ka onye edemede bụ Donald Miller na-ekwu, sị:
Ebumnuche maka akara anyị kwesịrị ịbụ na ndị ahịa ọ bụla nwere ike ịma kpọmkwem ebe anyị chọrọ iwere ha.
Kedu ọchịchọ ị na-eji akara gị abanye?
Banyere Iwuli akwukwo akuko
Usoro nke StoryBrand bu ihe ngosiputa putara ihe banyere ndi isi ahia na acho mgbe ha na ekwu okwu banyere oru ha. Usoro mgbanwe a maka ijikọ ndị ahịa na-enye ndị na - agụ akwụkwọ uru asọmpi kachasị, na-ekpughe ihe nzuzo maka inyere ndị ahịa ha aka ịghọta uru dị egwu nke iji ngwaahịa, echiche, ma ọ bụ ọrụ ha.
Iwuli akwukwo akuko eme nke a site na ịkụziri ndị na-agụ akwụkwọ akụkọ asaa gbasara akụkọ mmadụ niile na-azaghachi; ezigbo ihe mere ndị ahịa ji azụ ihe; esi dị mfe a ika ozi ka ndị mmadụ ghọta ya; na otu esi emepụta ozi kachasị dị irè maka weebụsaịtị, broshuọ, na mgbasa ozi.
Ma ị bụrụ onye isi ahia nke otu ụlọ ọrụ ijeri ijeri, onye nwe obere azụmaahịa, onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-agba ọsọ maka ọfịs, ma ọ bụ onye isi na-agụ egwu otu egwu egwu, Iwuli akwukwo akuko ga-agbanwe mgbe ebighi ebi n'ụzọ ị na-ekwu banyere onye ị bụ, ihe ị na-eme, na uru pụrụ iche ị na-ewetara ndị ahịa gị.
Ngosipụta: Abụ m Mgbakwunye Amazon ma jiri njikọ ịzụta akwụkwọ na post a.
Tags: brandmbọnewu a storybrandahịa akụkọọchịchọDonald millerNkwado ire ahịaakụkọ,
Nchịkọta Nlekọta WordPress: Ndepụta kachasị nke Atụmatụ, Ngwaọrụ, na Omume Kachasị Mma